Bit By Bit - Unxulumano - 6.4 ezine siseko
Ngemigaqo ezine eziya kukhokela abaphandi ejongene ukungaqiniseki ezisesikweni zezi: Ukuhlonela Abantu, Beneficence, Justice, Nokuhlonela Law and Public Inzala.
Imingeni yokuziphatha abaphandi abajongene nayo kwi-digital age bahluke kakhulu kunabo bexesha elidlulileyo. Nangona kunjalo, abaphandi banokujongana nale mingeni ngokwakhiwa kokucinga kokuziphatha kwangaphambili. Ngokukodwa, ndiyakholelwa ukuba imigaqo echazwe kwiingxelo ezimbini-i-Belmont Report (Belmont Report 1979) kunye ne-Menlo Report (Dittrich, Kenneally, and others 2011) -nokubanceda abaphandi bacinge ngemingeni yokuziphatha abajongene nayo. Njengoko ndichaza ngokucacileyo kwisihlomelo sesiganeko kule sahluko, zombini ezi ngxelo ziyimiphumo yeminyaka emininzi yokuqwalaselwa ngamapaneli oengcali ngamathuba amaninzi okubhaliweyo evela kwiintlobo ezahlukeneyo zabathintekayo.
Okokuqala, ngo-1974, ekuphenduleni ukungaphumeleli komthetho ngabaphenyi-njenge-Tuskegee Syphilis Study eyaziwayo apho amadoda angama-400 ase-Afrika aseMelika ayekhohliswa ngokunyanisekileyo ngabaphandi kwaye abenqaba ukufumana unyango olukhuselekileyo kunye oluyimpumelelo kangangeminyaka engama-40 (jonga i-appendix yomlando) -I-Congress yase-US idale ikhomishini kazwelonke ukuvelisa izikhokelo zomgaqo-nkqubo wophando olubandakanya izifundo zabantu. Emva kweminyaka emine yentlanganiso kwiziko leNkomfa yeBelmont, iqela livelise ingxelo yeBelmont , umbhalo omsulwa kodwa onamandla. I-Belmont Report ingumgaqo wezakhono zoMgaqo- nkqubo oqhelekileyo , isethi yemigaqo elawulwayo yophando lwezifundo zabantu ukuba i-IRB inikwe umsebenzi wokunyanzelisa (Porter and Koski 2008) .
Emva koko, ngo-2010, ekuphenduleni ukwehluleka kokuziphatha komphenyi wokhuseleko lwekhompyutha kunye nobunzima bokusebenzisa iingcamango kwiBelmont Report kwi-digital-age research, uRhulumente wase-US-ngokukodwa iSebe loKhuseleko lwaseKhaya-wenza ikhomishoni yerbhoni ukuvelisa isiseko solawulo olumgaqo-nkqubo ophando olubandakanya ulwazi kunye nobuchwepheshe bokunxibelelana (ICT). Isiphumo salo mzamo kwakuyimpendulo ye- Menlo (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .
Ngokubhaliweyo, iNgxelo yeBelmont kunye neNgxelo ye-Menlo inikezela ngemigaqo emine engakhokelela iingcamango eziphathekayo ngabaphenyi: Ukuhlonipha abantu , ukuxhamla , ubulungisa , kunye nokuhlonipha uMthetho noMdla woluntu . Ukusebenzisa le migaqo emine ekusebenzeni akusoloko kuchanekileyo, kwaye kunokufuna ukulinganisa nzima. Imigaqo, nangona kunjalo, inokunceda icacise ukurhweba kwezorhwebo, iphakamise ukuphuculwa koyilo lophando, kwaye yenza abaphandi bachaze ukuqiqa kwabo kunye noluntu.